အထက်တန်းကျောင်းသားအဖြစ် တွေ့ရမယ့် EXO KAI – Korea Celebrities Fans
About Korea Celebrities Fans
Team & Policy for Employee
Korea Celebrities Fans
Hangul is Beside You !
အထက်တန်းကျောင်းသားအဖြစ် တွေ့ရမယ့် EXO KAI
Date: February 7, 2017Author: KOREA CELEBRITIES FANS0Comments
Feb7ရက်မှာ SBS ရဲ့ Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့ Andante ရိုက်ကွင်းမှာ Kai ရဲ့ Snapshoot ပုံတွေတက်လာပါတယ် ။ January လ လယ်လောက်က ရိုက်ကူးတဲ့ ဒီဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းမှာတော့ Kai ဟာ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသားပုံစံပြောင်းလဲထားပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ မျက်နှာမှာ ပူပန်မှုတွေ ၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ပေါ်နေတဲ့အတွက် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်း Fan တွေက အံ့ဩနေကြပါတယ် ။
ရိုက်ကူးရေးပထမ နေ့မှာပဲ Kai ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြုံးရင်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။အလွယ်ကူဆုံးအပိုင်းတွေကိုတောင်မှ သူ့ဟာ အသံနေအသံထား ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှု ၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကြောင့် ဒါရိုက်တာ ပင် အံ့ဩခဲ့ရပါတယ် ။ Kai ဟာ ဇာတ်လမ်းအရ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ရပြီး လူလိမ်ဘဝကနေ လူကောင်းဘက်ကို ဦးတည်သွားမှာပါ ။
Kaiရဲ့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အဖွဲ့တွေကတော့ ” ကိုင်ဟာ ရာသီဥတု အေးပြီး အချိန်တွေ များတာတောင်မှပဲ ရိုက်ကူးရေးကို အာရုံစိုက်ပါတယ် ။ ဒါကလည်း သူ့ရဲ့ Professional ကျတဲ့ သဘောထားပါပဲ ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာပါ ။ Kai ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာတော့ ရှေ့ဆက်လက်ပြီး ကြည့်ကြရမှာပါ ။” လို့ပြောပါတယ် ။
 Hangura is Beside You ! 
 Korea Celebrities Fans 
❤ Instagram —> kcele_fans
Published by KOREA CELEBRITIES FANS
View all posts by KOREA CELEBRITIES FANS
Previous Previous post: You’re too much Upcoming Drama
Next Next post: Billboard မှာ Top 1 ဖြစ်ခဲ့တဲ့ 2NE1 – Good Bye
Korea Celebrities Fans ရဲ့ Official Website လေးကို ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်လို့ အဆင်မပြေသည်များရှိခဲ့ပါက သည်းခံပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
လူကြည့်အများဆုံး Post များ
EXO ရဲ့ ၁၃ယောက်မြောက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဂျင်ဟို
ပရိတ်သတ်တွေ အံ့ဩခဲ့ရတဲ့ EXO D.O ရဲ့ မင်္ဂလာပါ မြန်မာ
Park Hae Jin ( ပက်ခ်ဟေဂျင် )
EXO D.O ကို ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်း ဒါရိုက်တာ ရှင်းပြ
ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းပန်လိုက်တဲ့ EXO' D.O
LANEIGE ရဲ့ product အသစ်အတွက်ကြော်ငြာရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ကင်ယိုဂျန် #laneige @laneige_kr #kcf #myanmar #kpopnews
Korean male celebrities who have the most followers on instagram ! #Top10 #korean #koreacelebritiesfans #male #guy #handsome #cuttie #actor #singer #gallery #kcf #exo #bigbang #got7 #leejongsuk #namjoohyuk #gdragon #top #taeyang #lay #baekhyun #sehun #chanyeol #jackson
Dara held her 33 yeard birthday at Manila , Philippine . HAPPY DARA DAY @daraxxi #dara #dara_day #Korean #2ne1 #kcf #koreacelebritiesfans #myanmar
EXO' D.O. will attend Macau International Film Festival as an ambassador of Korea 👏👏 #exo #do #korean #kcf #koreacelebritiesfans #macau #filmfestival #gallery #photo #cute
Taeyang Eye,Nose,Lip M/V hits 100M views on youtube 😊 Congratulation Taeyang 👏👏 #ygfamily #bigbang #taeyang #youtube #100million #korean #kpop #kcf #koreacelebritiesfans #gallery #photo #Music
Chinese Actress Guan Xiao Tong , Luhan's girlfriend #korean #koreacelebritiesfans #kcf #Luhan #love #exo #photo #gallery #breakingnews #guanxiaotong
EXO' Luhan 💖 Guan Xiao Tong New Idol Couple #Couple #Luhan #breakingnews #exo #photo #gallery #love #koreacelebritiesfans #korean #kcf #chinese
Lee Dong Wook at - Paris Fashion Womenwear Spring
Wanna One ရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ပရိတ်သတ်တွေကြား အငြင်းပွားမှုကို YMC Entertainment ခြေရာခံ #wannaone #korean #idol #kpop #koreacelebritiesfans #kcf #YMC #boybang
မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ For Life သီချင်းကို English Version နဲ့ သီဆိုခဲ့တဲ့ EXO' D.O. စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ကင်ကိုင်ဘန် နဲ့ ကင်ဟီကျန်း တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကို အနုပညာရှင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ D.O. ကို ဂုဏ်ပြုတေးတစ်ပုဒ်ဆိုပေးဖို့ ကင်ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ D.O. က သူတို့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ For Life သီချင်းကို English Version နဲ့သီဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါမင်္ဂလာပွဲကို လီကွမ်ဆို ၊ SHINEE' အဖွဲ့က မင်ဟို ၊ လီဆန်ကွမ်း နဲ့ ဂျိုအင်ဆန် တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ 💚 Hangul is Beside You ! 💚 💛 KOREA CELEBRITIES FANS 💛 Original Link ---> http://bit.ly/2y3CkD9 #kcf #KoreaCelebritiesFans #exo #D.O #korean #kpop #Music #photo #gallery
2ne1 2pm 9MUSES award Baekhyun Bae Suzy BIGBANG BTS BTS FESTA Chanyeol CL D.O drama EXID Exo G-Dragon girls' generation Go Kyung Pyo Gong Yoo Goo Hara han ji min IU Jansu Ji Chang Wook Ji Sung Ji Yong junho Junsu kai kang ha neul Kaung Soo Kim Jonghyun kim soo hyun kim tae hae Kris kyo Hye San Lee Dong Wook lee jung suk lee min ho Lee Saung Gi Luhan MOMOLAND music Myanmar Nam joo Hyuk Park Bo Gum park bom Park Bo Young park hae jin Park Hyung Sik park shin hye Psy rain Red Velvet Roy Kim Sandara Park sehun Seungri Shim Eum Kyum SHINEE shin won ho Sister so ji sub Song Hye Kyo song joong ki soohyun Soyou T.O.P Taeyang Tara TWICE Uhm Jung Hwa Wanna One Xiumin YG Entertainment
View kcelebritiesFans’s profile on Facebook
View kcele_fans’s profile on Twitter
View kcele_fans’s profile on Instagram
© 2018 Korea Celebrities Fans